Dowladda Kenya oo beenisay wararka sheegaya in kooxihii weeraray Westgate ay baxsadeen | Salaan Media
Dowladda Kenya oo beenisay wararka sheegaya in kooxihii weeraray Westgate ay baxsadeen
September 29, 2013 | Published by: Hamse
Wasiirka Arrimaha gudaha Kenya Joseph Ole Lenku oo galabta shir jaraa’id qabtay ayaa beeniyay wararka sheegayay in kooxihii weeraray Rugta Ganacsiga ee Westgate Mall Sabtidii hore inay baxsadeen, markii la sheegay inay ku baxsadeen dhuun hoos martay dhismaha.
Joseph Ole Lenku ayaa si cadho leh uga jawaabay wararkaas, isagoo cadeeyay in aysan jirin cid ka baxsatay goobta, waxaana uu ku dhawaaqay in dhowaan ay soo bandhigayaan xogaha la xiriira ragii weeraray dhismaha iyo aqoonsigooda.
Mr Olenku ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay durbadiiba ammaanka goobta la wareegeen, isla markaana aanay jirin cid baxsatay.
Wasiirka Arrimaha gudaha Kenya ayaa sidoo kale meesha ka saaray digniinaha iyo xogaha sheegayay in la sii ogaa weerarka, waxaana uu sheegay inay wadaan baaritaano la xiriiray dad ka dambeeyay weerarka.
Waxaa uu sheegay in gaarigii ay wateen dableyda weerartay la haayo, isla markaana la qabtay nin lagu tuhunsan yahay inuu qeyb ka ahaa kooxihii wax ka fuliyay weerarka ay ku dhinteen in ka badan lixdan ruux.
Dhinaca kale Wasiirka arrimaha gudaha Kenya Joseph Ole Lenku ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay ka qaado xayiraada dhinaca socdaalka ee ay saartay Kenya, kadib markii Mareykanka uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan Kenya.
Warbixin lagu qoray Wargeyska Daily Nation ayaa lagu sheegay in weerarkan la sii ogaa, isla markaana maalin ka hor lagu wargeliyay baarlamaanka iyo hey’adaha ammaanka, iyadoo digniinahan ay ku qotomeen dhowr goobood oo uu weerarka ku wajahnaa.
Maalinta berri ayaa la filayaa in Gudiga difaaca baarlamaanka Kenya uu su’aalo weydiiyo Madaxa sirdoonka Kenya iyo laamaha ammaanka dalkaas, waxaana la hadal hayaa is bedelo saameeya hey’adaha ammaanka Kenya, kadib markii ay ku fashilmeen inay ka hortagaan weerarkii Westgate Mall.
Warbaahinta Kenya iyo kuwa caalamka ayaa isla dhex marayay warar sheegayay in dableydii weerarka ka dambeysay ay ku baxsadeen dhuun biyaha qaada oo hoos marta dhismaha Westgate.